ဝူ ဟန်ဗိုင်း ရပ်စ်အတွက် ၆ ရက်တည်း နဲ့ တည်ဆောက် ခဲ့ တဲ့ တရုတ်ဆေးရုံသစ်ကြီး ယနေ့ဖွင့် လှစ်လိုက်ပါပြီ(ရုပ်သံ) – Shwewiki.com
ဝူ ဟန်ဗိုင်း ရပ်စ်အတွက် ၆ ရက်တည်း နဲ့ တည်ဆောက် ခဲ့ တဲ့ တရုတ်ဆေးရုံသစ်ကြီး ယနေ့ဖွင့် လှစ်လိုက်ပါပြီ(ရုပ်သံ)
တ ရုတ်အစိုးရက ဝူဟန်မြို့မှာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတွေကို ကုသဖို့အတွက် ဆေးရုံအသစ်ကြီးကို ဝူဟန်မြို့ပြင်မှာ ဆောက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်…
ကုတင် ၁၀၀၀ ဆန့်တဲ့ အဆိုပါဆေးရုံသစ်ကြီးကို ၆ ရက်အတွင်းပြီးအောင် ဆောက်မယ်ဆိုတာကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ….
ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ တရုတ်အစိုးရက ၎င်းတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဆေးရုံအသစ်ကြီးကို ၆ ရက်တည်းနဲ့ ပြီးအောင်ဆောက်ပြီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်….
ကို ကာကွယ်ကုသနိုင်မည့် ဆေးရုံသစ်ကြီးကို ၂ ရက်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Dabie Mountain Regional Medical Centre လို့အမည်ပေးထားတဲ့ အဆိုပါဆေးရုံသစ်ကြီးကို ဝူဟန်မြို့နဲပ ၄၆ မိုင်အကွာမှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စက်ယန္တရားပေါင်းမြောက်မြားစွာကို အသုံးပြုတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ…. တချို့လူနာတွေကိုလည်း အဆိုပါဆေးရုံသစ်ကြီးမှာ ၂၈ ရက်နေ့ကတည်းက ပြောင်းရွှေ့ကုသနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်….
တကယ့်ကို အံ့မခန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပဲနော် ပရိသတ်ကြီး……ဒီ့ထက်ပိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးလည်း တီထွင်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..ဆေးရုံသစ်ကြီး ဗီဒီယိုကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်…
Video Source : Click Heart TV
တ ရုတျအစိုးရက ဝူဟနျမွို့မှာ ကူးစကျပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ လူနာတှကေို ကုသဖို့အတှကျ ဆေးရုံအသဈကွီးကို ဝူဟနျမွို့ပွငျမှာ ဆောကျလုပျနခေဲ့ပါတယျ…
ကုတငျ ၁၀၀၀ ဆနျ့တဲ့ အဆိုပါဆေးရုံသဈကွီးကို ၆ ရကျအတှငျးပွီးအောငျ ဆောကျမယျဆိုတာကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံးကလညျး ဖွဈမှဖွဈနိုငျပါ့မလားလို့ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ကွတာပါ….
ဇနျနဝါရီလ ၂၈ ရကျနမှေ့ာတော့ တရုတျအစိုးရက ၎င်းငျးတို့ပွောထားတဲ့အတိုငျး ဆေးရုံအသဈကွီးကို ၆ ရကျတညျးနဲ့ ပွီးအောငျဆောကျပွီး ဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ….
ကို ကာကှယျကုသနိုငျမညျ့ ဆေးရုံသဈကွီးကို ၂ ရကျအတှငျး ပွီးစီးအောငျ ဆောကျလုပျခဲ့ပွီး ဇနျနဝါရီလ ၂၈ ရကျနကေ့ ဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
Dabie Mountain Regional Medical Centre လို့အမညျပေးထားတဲ့ အဆိုပါဆေးရုံသဈကွီးကို ဝူဟနျမွို့နဲပ ၄၆ မိုငျအကှာမှာ တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပွီး စကျယန်တရားပေါငျးမွောကျမွားစှာကို အသုံးပွုတညျဆောကျခဲ့တာပါ…. တခြို့လူနာတှကေိုလညျး အဆိုပါဆေးရုံသဈကွီးမှာ ၂၈ ရကျနကေ့တညျးက ပွောငျးရှကေု့သနပွေီဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ….
တကယျ့ကို အံ့မခနျးစှမျးဆောငျရညျပဲနျော ပရိသတျကွီး……ဒီ့ထကျပိုစှမျးဆောငျနိုငျပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈလူနာတှကေို ပြောကျကငျးစတေဲ့ ဆေးလညျး တီထှငျအောငျမွငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..ဆေးရုံသဈကွီး ဗီဒီယိုကိုလညျး ကွညျ့ရှုနိုငျဖို့ အောကျမှာ ဖျောပွပေးထားပါတယျနျော…
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူနှစ် ဦး ရှိနေသည် ဆိုသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်နေမှုအေ ပါ် မူဆယ်ဆေးရုံဘက် မှ ပြန်ရှင်းပါပြီ
သေဆုံးသူ နဲ့ ကူးစက်ခံရ သူ တရှိန် ထိုး တိုးတက်လာခဲ့ တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ